Sir Alex Ferguson oo Isbitaal loola Cararay iyo Xaaladiisa Caafimaad oo qatar lagu Tilmaamay+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Sir Alex Ferguson oo Isbitaal loola Cararay iyo Xaaladiisa Caafimaad oo qatar lagu Tilmaamay+Sawiro
(07-05-2018) War dhawaan soo baxay ayaa sheegaya in Macalinkii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson la dhigay Cusbitaal loona dalbay Gar Gaar deg deg ah kadib markii uu miyir daboolmay.
Sir Alex Ferguson oo 76 Sano jir ah ayaa lasheegay in qaliin looga samayn doono Maskaxda kadib markii uu dhulka kju dhacay Sabtigii waxaana Xaaladiisa lagu Tilmaamay in ay tahay mid qatar badan.
Macalinkii hore ee Manchester United ayaa lacadeeyey in Anbalaas looga qaaday Gurigiisa uu ku yaala halka looyaqaan Cheshire isla Markaana lageeyey Macclesfield district hospital.halkaa oo loogu Sameeyey gar gaar deg deg ah isaga oo sugaya in uu maro qaliin dhanka Maskaxda ah.
Qaar ka mid ah ehelada Sir Alex Ferguson ayaa Warbaahinta u sheegay in ay rajeynayaan in uu ka soo kaban doono xanuunkaan balse qaar ka mid ah dhaqaatiirta Macclesfield district hospital ayaa laga soo xigtay in ay aad u darantahay Xaaladiisa Caafimaad inta badana aan laga bad baadin Xanuunka haya Macalin Sir Alex Ferguson.
Alex Ferguson ayaa muuqaalkiisa oo Caafimaad qaba waxaa u danbeysey kulankii Manchester United iyo Arsenal markaas oo uu bilad sagootin ah Gudoonsiiyey Saaxiibkii Arsene Wenger balse waxaa macquul ah in isaga lasagootinayey.
Qaar ka mid ah Cayaartoyda kala duwan ee kubada cagta ayaa barahooda bulshada ku daabacay Ereryo ay Caafimaad ugu Rajeynayaan Macalin Alex Ferguson kuwaas oo sheegay in ay u rajeynayaan in uu dhaqso kaga soo kabsado anuunka haya.